Mareykanka Oo 7 Milyan Oo Dollar Ugu Deeqay Somalia, Si Looga Hortago Coronavirus – somalilandtoday.com
Mareykanka Oo 7 Milyan Oo Dollar Ugu Deeqay Somalia, Si Looga Hortago Coronavirus
(SLT-Washington)-Wasaaradda Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday taageero lacageed oo loogu talagalay wax ka qabashada iyo ka hortagga cudurka Coronavirus oo adduunka oo dhan ku haaya fara ba’an, dad kumanaan qof ay u geeriyoodeen.
Lacag gaadheysa 274 Milyan oo gargaar degdeg ah iyo kaalmo bani’aadanimo ayuu Mareykanka ugu deeqay dalalka baahida weyn u qaba si ay ula tacaalaan cudurkan.
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Soomaaliya ay lacagtaas ka heli doonto 7 milyan oo doollar.
Lacagtan ayaa lagu bixin doonaa arrimaha caafimaadka iyo biyaha, si wax looga qabto, waana kaalmadii u horreysay ee Mareykanka u balan-qaada Soomaaliya, kaddib uu caalamka ka dillaacay cudurka saf marka noqday ee Coronavirus.
Soomaaliya ayaa dhawaan dalbatay lacag gaadheysa 5-milyan oo dollar, si wax looga qabto cudurka Coronavirus, waxaana dowladdu ku dhawaaqday illaa saddex kiis oo cudurka, kaasoo mid ka mid ah markii dambe laba baadhitaan isku xiga oo la marsiiyay, isla markaana 14 maalmood meel ku karantiilnaa laga waayay cudurka, lana fasaxay.